अनलाइन डेटिङ गर्नुहुन्छ ? यी ८ कुरा विचार गर्नुस्… - OneZero News
अनलाइन डेटिङ गर्नुहुन्छ ? यी ८ कुरा विचार गर्नुस्…
हिलेको विश्व इन्टरनेटको जालोमा बेरिएको छ । इन्टरनेटको प्रयोगले मानिसलाई विश्वका हरेक कुनाको अवस्ताबारे जानकारी दिनुका साथै हरेक ठाऊँका मानिससँग मित्रता समेत गास्ने मौका दिएको छ । मानिसहरू इन्टरनेटबाटै साथी बन्ने, प्रेम गर्ने र विबाह गर्ने सम्मका काम समेत गर्न थालिसकेका छन् । हुँदा हुँदा मानिसहरू डेटिङ समेत अनलाइनबाट नै गर्न थालिसकेका छन् ।